Maskaxdu waxay u adeegtaa in ka badan 500 oo hudheello adduunka ah iyada oo ku saleysan laba xaqiiqo, in la sameeyo wax soo saarka ugu fiican iyo in la ilaaliyo adeegga ugu fiican.
MIND sanad walba waxay soo saartaa in kabadan 100 milyan oo kaararka muhiimka ah ee huteelka waxayna uqeebisaa in kabadan 100 wadan oo adduunka ah.
Waxaan u adeegnaa magac caalami ah sida Hilton, Marriott, iyo Crown plaza, Sherton, Holiday Inn, Fourseason, IBIS iwm.
Noocyada kaarka muhiimka ah Kaarka muhiimka ah ee RFID
Koodhadhka furaha hudheellada ee loo yaqaan 'RFID encoded' oo loo yaqaan 'RFID' ayaa badanaaba nidaamka qufulka hudheellada ee RFID
Waxyaabaha Greek PVC, 100% PVC cusub
Daabacaadda Heidelberg daabacaadda dejinta / daabacaadda shaashadda Pantone:
100% u dhigma macaamil midab loo baahan yahay ama muunad
Taageero farsamo Waxaan u fidineynaa adeeg qoddobo qashin-qubka labada xarig magnetic iyo kaararka muhiimka ah ee rfid chip
Huteelka Wadaagga: Hotelada ugu caansan adduunka sida: Hilton, Marriott,
Fagaaraha Crown, Sheraton, Holiday Inn, Afar xilli, Ibis iwm.
Farshaxanada Gloss / Varnish / UV / Spot UV / Glittering / Dahab ama shaabad lagu daboolayo bireed
Waqtiga wax soo saarka sida caadiga ah 7-10 maalmood tirada 1-50,000pcs ee labadaba kaararka wax lagu qoro ama kuwa la diro
Faahfaahinta xirxirashada 200pcs pack shrinkwrap ama 200pcs pack bag bac pp shaqsiyeed, ka dibna ku rid hal sanduuq oo cad
oo leh sanduuq jiingado oo xoog leh oo ka baxsan ama macaamiisha looga baahan yahay.
Waqtiga dirida 3-5 maalmood oo shaqo oo ah xawaare (DHL, TNT, Fedex, UPS iwm)
Sample Charge Waxaan bixin karnaa muunad bilaash ah oo keyd ah, laakiin xamuulka wuxuu u baahan yahay inaad adigu bixiso.
Lacag bixinta Waxaan aqbalnaa T / T, Paypal, Escrow, Western Union, hubinta ganacsiga iwm.
Naqshadeynta iyo taageerada farsamada
1. Naqshad: Ama noo soo dir faylkaaga vetor-ka naqshadeynta ama na sii fikirkaaga / fikirkaaga, MIND waxay leedahay 15 koox naqshadeeye ah, waxay kuu qaabeyn kartaa furaha furahaaga iyo lacag la'aan
2. Farsamo: Nooc kasta oo cusub oo kaararka muhiimka ah, Mind wuxuu leeyahay koox farsamo yaqaanno xoog leh, wixii brnad cusub ee kaararka kaararka hudheelka ah, nala soo xiriir oo keliya shuruudahaaga. Kooxdayada farsamada ayaa kuu qori kara kaarka adiga.
Kaararka muhiimka ah ee RFID Waqtiga dirida
QTY. (Kumbiyuutarada) leh habayn iyada oo aan wax lagu qorin
≤10,000 7 maalmood 7 maalmood
20,000-50,000 8 maalmood 7 maalmood
60,000-80,000 8 maalmood 8 maalmood
90,000-120,000 9 maalmood 8 maalmood
130,000-200,000 11 maalmood 8 maalmood
210,000-300,000 12-15 maalmood 9-10 maalmood
Tirada Cabbirka kartoonka Miisaanka (KG) mugga (cbm)
Hore: Kaarka xoq
Xiga: Sumadda NFC ku dheji sumadda NFC
Huteelka Key Card
Kaararka Muhiimka ah ee Hotelka
Kaararka Muhiimka ah ee Hoteelka
Kaararka Muhiimka ah ee Hotel Wooden
Xubin / Kaar Ganacsi